Sida loo joojiyo digniinaha tababarka ee Apple Watch | IPhone news
Sida loo damiyo digniinaha tababarka ee Apple Watch
Jordi Gimenez | 26/10/2021 12:00 | Apple Watch, Casharrada iyo buugaagta
Tani waa mid ka mid ah su'aalaha ay qaarkiin si joogta ah noo weydiiyaan waana sababta aan u go'aansanay inaan abuurno casharkan yar. Dhab ahaantii tani waxay shaqeysaa in xaaladaha qaarkood si aan ikhtiyaari ahayn ayaa loo hawlgeliyay goobaha saacadaha wayna fududahay in la joojiyo.
Xaaladeyda, si toos ah ayaa loo hawlgeliyay (ama waxaa laga yaabaa inaan hawl galiyay anigoon ogayn) noocii ugu dambeeyay ee la sii daayay ee nidaamka hawlgalka watchOS. Qaar badan oo idinka mid ah ma laha firfircooni laakiin sidoo kale way wanaagsan tahay in la ogaado sida aan u joojin karno kuwaas "Tababarka hakinta" ama "garaanta jimicsiga la dhammeeyey" digniino, iyo kuwo kale.
Apple Watch ayaa awood u leh na soo ogeysii waqti gaar ah inta lagu jiro tababarka taasina waxay hoos u dhigi kartaa. Waa ikhtiyaar in kiiskeyga uu keligiis hawlgeliyay, ma aanan habeynin wakhti kasta. Hadda waxaan aragnaa sida loo hawlgeliyo ama loo demiyo iyadoo la raacayo tillaabooyinkan fudud. Tallaabadan waxaa laga samayn karaa saacadda lafteeda ama iPhone, marka hore waxaan arki doonaa sida loo joojiyo ogeysiisyadan ama digniinaha iPhone:
Waxaan ku fureynaa barnaamijka Watch-ka iPhone-ka
Guji ikhtiyaarka Tababarka
Waxaan kor u qaadnay oo raadineynaa ikhtiyaarka ugu dambeeya: Jawaabaha codka
Halkaa marka ay marayso waxaan aragnaa in ay si cad u tilmaamayso taas Siri waxay noo akhriyi kartaa ogeysiisyada ku saabsan tababarka. Waanu deminay ama hawlgelinay waana taas. Si aad toos uga shaqeyso Apple Watch waa in aan raacnaa tillaabooyin la mid ah laakiin saacadda.
Waxaan riixnaa taajka dhijitaalka ah oo aan galno Settings. Marka gudaha loo galo waxaan si fudud u raadineynaa app-ka tababarka oo aan hoos ugu dhaadhacno hel ikhtiyaarka "jawaabadaha codka" Kaas oo ah ikhtiyaarka ay tahay in aan dhaqaajino ama kiiskan la demiyo. Waxaa laga yaabaa in aniga oo kale aad dhaqaajisay doorashadan adiga oo aan ogayn ama xitaa si toos ah ayaa loo hawlgeliyay, muhiimadu waa in aan ogaano halka aan aadi karno si aan u damino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Sida loo damiyo digniinaha tababarka ee Apple Watch
Wararka xanta ah ee cusub ayaa tilmaamaya isbeddellada ugu yar ee dib-u-qaabaynta iPhone SE 3 (ama SE Plus)
Maxaa ku cusub macruufka 15.1